Codka nool ee General Galaal “Xamar waa qafaalan tahay, gebi ahaanteeda” | Dhacdo
Home Wararka Maanta Codka nool ee General Galaal “Xamar waa qafaalan tahay, gebi ahaanteeda”
Codka nool ee General Galaal “Xamar waa qafaalan tahay, gebi ahaanteeda”
General Maxamed Nuur Galaal oo ka tirsanaa Saraakiishii hore ee Ciidanka Xoogga Dalka ayaa Axadii ku dhintay weerarkii Hotel Afrik ee Magaalada Muqdisho.
General Maxamed Nuur Galaal oo horey uga hadlay weerarada ka dhacaya Magaalada Muqdisho ayaa masuuliyadeeda dusha uga tuuray Madaxda Dowladda Federaalka.
“Xamar waa qafaalan tahay, gebi ahaanteeda waa qafaalan tahay. Dhibaatada dhan waxa weeye nidaamka ay wax u wadaan nimankan masuuliyiinta ahoo siyaasiyiinta ah ayaa qariban. Laguma karo ciidamada saan haloo sameeyo, saan hala yiraahdo. Taakulayn uma hayaanoo, umana doonayaan.” Ayuu yiri General Galaal.
Waxa kaloo uu yiri “Ma’ogolo xitaa in la yiraahdo war nimanyahow saanu si maahee bal saana ku daya, waxna ma’oga ayagana. Qaabka ay ku socdaan qaab ka duwanaa jira.”
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri “Meeshaan dadka iyo ciidamada haddaan leesku xirin, wax hagaagaya maleh, ciidamadana aan la hubayn, oo si fiican loo hubeynoo qalab loo helin. Labadaasi ayaa muhiim ah, ciidanka oo si fiican loo qalabeeyo iyo ciidanka iyo dadkoo gacmaha is qabsada. Hadda labadiiba waa maqan yihiin, waa maqan yihiin labadiiba, xagee guusha ka imaanaysaa?”
General Galaal ayaa intaa ku daray “Dagaalkii sidiiyuu u socdaa, nolol xumidii sidiiyee u jirtaa, wax badanoo aad mooddo in horumar la sameeyay waa jiraan, laakiin meeshii la rabay ma gaarsiisano, mana u dhawa. Markaa muddo dheer oo kale in lagu sii jirayaa ii muuqata.”
Halkan ka dhageyso:- https://www.facebook.com/100001115776279/videos/3618357718211385/
Previous articleWararkii ugu dambeeyay shirka lagu wado inuu ka furmo Dhuusamareeb
Next articleLafta-gareen oo si diiran loogu soo dhaweeyay Dhuusamareeb (SAWIRRO)